အမေရိကန်တပ်စခန်းများကို အီရန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်နယ်ထရမ့် ချက်ခြင်းတုံ့ပြန် by popolay.com
အမေရိကန်တပ်စခန်းများကို အီရန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်နယ်ထရမ့် ချက်ခြင်းတုံ့ပြန်
08 Jan 2020 1,174 Views
မနေ့ညက အီရတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများကို အီရန်တို့က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတ်ဆန်ဆိုလာမာနီ အတွက် လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဒုံးကျည်များနဲ့ စတင်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ အီရန်တို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရပြီးနောက် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က တွစ်တာပေါ်ကနေ ချက်ခြင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“အားလုံးအခြေအနေကောင်းပါတယ်! အီရတ်မှာရှိတဲ့ စစ်ခြေစိုက်စခန်းနှစ်ခုကို အီရန်ဘက်က ဒုံးကျည်တွေပစ်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ အပျက်အဆီးတွေကို စုံစမ်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အခုချိန်အထိတော့ အခြေအနေကောင်းပါတယ်! ကျွန်တော်တို့ စစ်တပ်တွေက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲ ရှိနေနေနေ အခုချိန်ထိတော့ အကောင်းဆုံးသော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စစ်တပ်ပါ! မနက်ဖြန် မနက်မှာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါမယ်” ဟု ထရမ့်က တွစ်တာပေါ်မှာ ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်လောက်က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်တပ်တွေရဲ့အဆိုအရ ဒုံးကျည် ၁၀ စင်းကျော်ကို အီရတ်မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်စစ်အေခြေစိုက်စခန်း al Asad base ကို ပစ်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“အာဇာနည်ကြီးဆိုလာမာနီ စစ်ဆင်ရေးကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်စောစောပိုင်းမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်၊ မြေပြင်ကနေ မြေပြင်ပစ်ဒုံးလက်နက် ၁၀ ခုနဲ့ အမရေိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်း al Asad base ကို အောင်မြင်စွာ ပစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု အီရန်ရုပ်သံလိုင်းမှာ အီရန်စစ်တပ်က ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်ခံရမှု မှန်ကန်ကြောင်း ပင်တဂွန်က နောက်ပိုင်းမှာ အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ မဟာမိတ်အခြေစိုက်စခန်းတွေအပေါ် ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ ဒုံးကျည်တွေ ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီဒုံးကျည်တွေကို အီရန်က ပစ်လွှတ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ် အီရတ်မှာရှိတဲ့ အခြေစိုက်စခန်း ၂ ခု တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ lrbil နဲ့ AI Asad မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်စစ်စခန်းနဲ့ မဟာမိတ်အခြေစိုက်တို့ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှုတွေကို ကနဦးစုံးစမ်းစစဆေးမှုတွေ စတင်နေပါပြီ” ဟု ပင်တဂွန်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ကာကွယ်ရေးဌါနအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်းရွက်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အဲဒီနေရာက အခြေစိုက်စခန်းတွေကို အခုလို တိုက်ခိုက်ခံလာရနိုင်တယ်ဆိုတာကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တပ်လှန့်သတိပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်” လို့ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Nancy Pelosi နဲ့ အခြားသော ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။